Simba reALT uye TAB | Martech Zone
Simba reALT uye TAB
China, Kurume 25, 2010 Muvhuro, Ndira 1, 2018 Robby Kuurayiwa
Kana zvasvika kune tekinoroji yekombuta, ndinoshamisika kuti vanhu vangani vasinganyatso ziana nemaviri mabhatani akakosha pane yako keyboard. Simba rinotyisa reALT neTAB rine mamwe matipi akakosha ekugadzira kune chero munhu anoshandisa komputa kusimudzira kana kuita bhizinesi ravo. Mune mamwe mazwi: anenge munhu wese arino kuverenga Martech!
Kuti tinzwisise chaizvo kusangana kwe ALT + TAB, tinofanirwa kutanga nekukurukura nezve ALT kiyi. Iwe unogona kunge uchiziva kuti "ALT" ipfupi kune "chinjana." Izvi zvinoreva kuti iri bhatani diki diki rakagadzirirwa kushandura iro rese basa reazvino mushandisi interface. Makomputa masvikiro dzimwe nguva vanoshevedza izvi "modhi switching." Kudzvanya paki "ALT" kiyi inotaurira muchina kuti uite zvakasiyana zvachose kupfuura zvazviri kuita parizvino.
Izvi zvingaite senge zvakawandisa. Mushure mezvose, iyo SHIFT kiyi inoita kunge inoita zvakafanana pakuona kwekutanga. Asi SHIFT inongochinja mavara kubva kumusoro kuenda kudiki kesi. "A" yakangofanana ne "a." Muchokwadi, matapureta ekare aitova nemaviri makopi etsamba. Iyo "ALT" kiyi inotora muchina wako kupinda munyika nyowani.
Imwe ALT + TAB
Zvinogona kuita kunge hapana chinoitika kana warova ALT. Dhinda uye usunungure kiyi kagumi uye hapana kana Windows kana Mac muchina inopindura. Asi kana iwe ukabata ALT kiyi pasi wobva wasvika kuyambuka wobva wadzvanya iyo TAB kiyi kamwe chete kwechipiri chete uye wosunungura iyo TAB kiyi, iwe uchaona hwindo richioneka. Iyo inonyora ese anoshanda mafomu, uye iwe uchaona kuti inotevera mune irondedzero yakasimbiswa. Paunosunungura ALT, iwe unobva watochinjirwa kuchirongwa ichocho.
Simba reALT + TAB roga rinogona kugadzira gadziriso yakakura kwazvo. Iwe haufanire kutora maoko ako kubva pane iyo keyboard uye enda kune mbeva kana iwe uchida kuchinja pakati pemaviri akavhurwa mafomu. Enda undozviedza izvozvi. Shandisa maminetsi mashoma kuti uzive kuti ALT + TAB inonzwa sei.
Kana iwe ukanyatsoteerera kune imwechete ALT + TAB, iwe unozoziva kuti inonyatso shanduka pakati pe mafambiro kunyorera uye iyo yekupedzisira kushandiswa kunyorera. Izvi zvinoreva kuti kana iwe ukachinja kubva mukuti, webhu bhurawuza rako kune rako izwi processor ne ALT + TAB, unogona kushandura shure neimwe ALT + TAB. Zvese izvi kuchinja nekudzoka zvinogona kutaridza sekuparadza nguva, asi izvi ndizvo chaizvo zvatinoita tese kana tichitsvaga nekunyora. ALT + TAB yakakwana zuva rega rega kufamba.
Kuchengetedza masekondi mashoma uchifambisa ruoko rwako nekudzoka kubva kumushonga pamwe zvinoita kunge zvisingaite. Wedzera izvo zvakapetwa mazana emazana ekushandura awa yega yega. Funga kuti iwe unomborasa tarisiro yako kwenguva pfupi kana iwe uchifanira kutsvaga iyo mbeva nemaonero ako ekumusoro uye dhonza iyo kara pasi pasi pechiso uye kumashure. Kudzidzira iyo imwechete ALT + TAB kunoshandura zvinoshamisa kugadzirwa kwako.
Yepamberi ALT + TAB
Pane zvakawanda kupfuura kungoita zvekutanga. Kana iwe ukarova ALT + TAB asi bata bata ALT bhatani, iwe uchaona ese ma icon eanoshanda mafomu. Iwe unogona kushandisa akadzokorora akadzvanywa eiyo TAB kiyi kutenderera uchidzokera kuzvirongwa iwe zvawakamboshandisa nguva yadarika Mubatanidzwa weSHIFT + TAB unoenda kunopesana.
Kana iwe wakambozvibata wakateedzera dhata kubva kune chimwe chirongwa ichienda pane chimwe nema keystrokes, ALT + TAB inogona kuita kuti ruzivo rwako ruve rwekushandisa chete iyo keyboard. Izvi zvinogona kukonzeresa mukukosha kwekugadzira kugadzirwa.
Tora nguva yekudzidza ALT + TAB. Iwe uchakurumidza nemuchina uye nekukwanisa kuwana rimwe basa riitwe. Asi zvinonyanya kukosha, ziva kuti makiyi senge ALT ari chaizvo nezve kuchinja maitiro yemasisitimu akatikomberedza. ALT yakafanana nemusiyano uripo pakati pekushanda padhesiki rako uye kutaura parunhare. Izvo zvekuchinja kune imwe nyika.
Context-switching ndiyo yakanyanya mutengo mukugadzirwa. Kukanganisa kwese kunopa mukana wekukanganwa zvawanga uchiita. Ratidza zvaunoita izvo zvinoda kuti iwe uchinje zvaunotarisa, kunyangwe zvichibva kukhibhodi kuenda kune mbeva. Iwe unowana yako yekufambisa yekufambisa inomhanya zvakanaka uye iwe unowana zvimwe kuitiswa.
Tags: alt tagtapureta
Mar 25, 2010 pa 4: 32 PM
Mumwe mushandi pamwe neni akambondidaidza kuti 'chirema mbeva' nekuti ini ndaigara ndichishandisa grafiki yemushandisi yekushandisa. Zvakatora makore mashoma ndisati ndafunga mashandisiro anoita mapfupi. Sezvineiwo zvakakwana, ini ndinotenda kuti vashandisi veMac vagara 'vakapihwa mubairo' nemaitiro emakiyi ekurova akaita zvinhu zvikuru. Mahwindo abata - asi shamwari dzangu zhinji paMacs dzinonakidza pakuziva nzira dzese dzapfupi… uye kugadzirwa kwavo kunozviratidza!
Nov 16, 2012 pa6: 03AM
Chinyorwa chikuru chandaiziva kubva kuti ini ndiri asingazive pc mushandisi